बैशाख – १ नेपालीहरुले नयाँ बर्ष २०७६ साललाई धुमधाम र ताम्झामका साथमा यतिबेला मनाउँदैछन् । शुभकामना आदनप्रदानसँगै आफन्तसँग भेटघाट,मिठो परिकारको स्वाद, नाचगान, बनभोज, साथै नयाँ ठाँउको भ्रमण गरि आ-आफ्नै ढंगले मनाउने नयाँ बर्ष हरेक बर्षको बैशाख १ गते नेपाली समुदायले मनाउने गर्छन् । नेपाली नयाँ साल फेरिएसँगै थाईल्याण्डमा पनि नयाँ साल फेरिएको छ । थाई समुदायले
बस्नेतको राष्ट्रिय गित सिर्जना र पसिना देश कै माटोमा हिड्नु पर्छ अब हामी उही देशको बाटोमा गित सार्बजनिक
रमेश खड्का थाइल्याण्ड नेपालकाे राष्ट्रियता देश को राजनितिक अस्थिरता अनि देशको राष्ट्रिय सम्पदा लाइ झस्काउदै सोलुखुम्बु की सान्ति बस्नेत ले पहिलो राष्ट्रिय गित सार्बजनिक गरेकी छिन । गित हिमाल पहाड तराइ सगै बिश्वको सगरमाथा सगै जोडियको छ नेपाली लाइ सुहाउछ अाफ्नै भेषमा बगाउ अब पसिना अाफ्नै देशमा बोलको गित ले बिदेशीएका युवा हरूलाइ स्बदेशमा फर्केरै
पक्की घर पाएर भूकम्पपीडित फुरुंग
रामबहादुर कटुवाल ७८ वर्षका भए, उनकी पत्नी जनमाया ६६। भूकम्पले घर भत्किएर बिचल्लीमा परेका कटुवाल दम्पत्ति नयाँ घरमा गृहप्रवेश गरेका छन्। गत असार २७ गते भव्य रूपमा घरपैंचो गरेर उनीहरू नयाँ घरमा पसेका हुन्। नयाँ पक्की घरमा बस्न पाएकोमा कटुवाल दम्पत्ति दंग छन्। ‘घरपैंचो गरेर असार २७ गते नयाँ घर पसेका हौं,’ रामबहादुरले भने। नयाँ
बंगलादेशमा डाक्टर पढ्ने चेलीबारे मन्त्रीले किन बोले यस्तो ?
मन्त्री तामाङ र व्यवसायी प्रसाईँ आलोचित काठमाडौं : प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका माग राखेर सुरु गरेको अनशन तेस्रो सातामा चलिरहँदा बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीबारे एउटा विवादित विषय चर्चामा आएको छ। अधिकांशले सामाजिक सञ्जालमा ‘आपत्तिजनक’ भनेको यो विषयमा मन्त्रीले पनि मुख खोलेपछि उनीसमेत विवादमा तानिएका छन्। एउटा दलले त उनको राजीनामा समेत
बाढीपहिरोको बेदना गीतमा
काठमाडौँ : सुदूरपश्चिममा २०५० साल असोज ८ गते आएको बाढी, पहिरोको घटना समेटेर नयाँ गीत बजारएमा आएको छ । लोक तथा डेउडा गायक सुर्य बिरहि साउदले बाढीपहिरोको यथार्थ घटनामा आधारित बनाएर ‘बर्खा’ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । गायिका गौरी भट्ट र सुर्य बिरहि साउदको स्वरमा रहेको गीतको एरेन्ज बिनोद बाजुरालीले गरेका हुन् भने मिक्सिङ खड्क बाजुरालीले गरेका
एसियामा बहुदल फाप्दैन
एसियामा बहुदल फाप्दैनआफ्नै पूर्वपार्टीको ६ दशक लामो शासन अन्त्य गर्दै ९२ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका मलेसियाका महाथिर मोहम्मदले पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिब रजाकविरुद्ध भ्रष्टाचार, घुसखोरी, सरकारी कोष चोरीजस्ता आरोप लगाएका छन्। नाजिबविरुद्ध अनुसन्धानकर्ताहरूसँग ‘दह्रो मुद्दा’ रहेको महाथिरको दाबी छ। चुनाव हारेको १० दिन नबित्दै नाजिबलाई संदिग्ध अपराधीका रूपमा हेर्न थालिएको छ। मलेसियामा मात्र यस्तो भएको होइन। दक्षिण
हिन्दी फिल्म बनाउँदै नेपाली युवा
झापाका किरण खतिवडाले भारतमा फिल्म निर्माण गर्ने भएका छन्। उनले हिन्दी भाषामा ‘तुझसा जमी पे कहाँ’ फिल्म बनाउने भएका हुन्। उनको आफ्नै प्रोडक्सन हाउस इन्सपायर मिडिया प्रालिले हिन्दी फिल्म बनाउने भएको हो। त्यसका लागि उनले भारतमा अनुमतिसमेत लिइसकेका छन्। यसअघि पनि उनले सन्थाल भाषाको फिल्म ‘बोनोदल’ बनाएका थिए। उनको उक्त फिल्म झारखण्डमा भएको फिल्म फेस्टिभलमा
संसद कोमल अोली को गित सार्वजनिक जन्ताको सेवा सगै अाफ्नो पेसा पनि सगै अगाडी बढ्दै अोली
रमेश खड्का, सोलुखुम्बु संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएपछि कोमल वली र उनकी बहिनी प्रज्ञा वली ‘वली सिस्टर्स’ को संयुक्त तीज गीत ‘आउ दीदी बहिनी हो गरौं रमाईलो’ आज सार्वजनिक भएको छ । गीतमा संगीतकार तथा गीतकार एकनारायण भण्डारी रहेका छन् भने ठेट नेपाली शब्द तथा मौलिक भाकाले गीतको महत्व अझ बढाएको देखिन्छ ।